Templates PowerPoint BILAASH ah - Xulashada kala duwan | Hal -abuureyaasha Online
Encarni Arcoya | 11/09/2021 13:03 | Khayraadka
Mid ka mid ah aaladaha ugu badan ee ardayda, ha ahaado dugsiga, machadka ama Jaamacadda waa, shaki la'aan, PowerPoint. Iyaga oo awood u leh inay ku sameeyaan bogagga ay ku soo bandhigaan mawduuc fasalkooda, ama ay tahay inay ku wareejiyaan macallimiintooda. Barnaamijka dhexdiisa waxaad ka heli kartaa habyaalada barta korontada Laakiin maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad noqoto mid asal ah?
Nasiib wanaag, waxaan ka fikirnay arrintaas, si aan u siinno taabasho hal -abuur leh iyo inaan ka baxsanno kuwa caadiga ah si shaqadaadu u sii muuqato mid ka sii wanaagsan. Ma rabtaa inaad ogaato sida? Eeg qaab -dhismeedka PowerPoint ee aan ogaannay inaad u adeegsan karto shaqadaada, ha ahaato mid xirfad leh ama mid waxbarasho. Tani waa hubaal inay soo jiidan doonto dareenka kuwa arka.
1 Maxaad ugu sharraxaysaa shaybaarada Powerpoint asalka ah
2 Habyaalada Power point -ka ugu fiican si aad uga baxdo sida caadiga ah
2.1 Template -ka lagu soo bandhigayo goobo badan oo midab leh
2.2 Qaabka qaansoroobaad
2.3 Foomamka Awoodda Vintage Power point
2.4 Hababka dhibcaha awoodda ee Canva
2.5 Bandhig faneed qosol leh
2.7 Habyaalada barta korontada ee alaabta
2.8 Soo bandhigida summada
2.9 Qaababka Soo Bandhigista Xarrago leh ee Awoodda Awoodda
2.10 Soo bandhigid alaab
2.11 Template ganacsi
2.12 Habyaalada PowerPoint ee makhaayadaha
Maxaad ugu sharraxaysaa shaybaarada Powerpoint asalka ah
Haddii aad haysato barnaamijka PowerPoint, waa wax iska caadi ah in aad ku haysato sheybaar oo aad u isticmaasho shaqadaada. Si kastaba ha noqotee, haddii aad wax badan bilowdo, waxaa laga yaabaa inay u muuqdaan kuwo soo noqnoqda, maadaama waxa kaliya ee aad beddeli doontaa ay tahay midabada iyo qoraalka.
Markii hore, iyo in muddo ah, tan aad bay u fiicnayd maxaa yeelay jidkaas mashaariicda oo dhan isku qaab bay ahaayeensidoo kale shaqooyin, oo aysan jirin wax kala soocan. Laakiin, waqtigu wuu sii socdaa, dadku waxay bilaabeen inay wax doortaan, si ay uga daalaan inay arkaan wixii caadiga ahaa, waxayna bilaabeen inay ogaadaan in, isbeddello yar, ay heleen is -dhexgal badan, dhaqdhaqaaqyo dheeri ah, iwm.
Hadda haysashada templates Powerpoint oo aan oggolayn oo keliya qoraalka in lagu qoro kombiyuutar, laakiin sidoo kale qurxiya oo ka dhiga fiirsiga fiiriyaha inuu diiradda saaro faahfaahinta laga wada hadlay, aad buu u guulaystay. Maskaxda ku hay inay tahay inaad ka soocdo dadka badan oo hal -abuurnimadani waa qayb aad muhiim ugu ah gaaritaanka tan. Maxaa ka sii badan, soo -bandhigga Powerpoint waa xiriirkii ugu horreeyay ee lala yeesho dhagaystayaashaada, Waxayna saamayn kartaa guusha ama guuldarrada dhammaan shaqadaada. Marka maxaad u haysan weyday qaab -dhismeedyo quruxsan oo runtii hodan ku ah mashaariicdaada?
Habyaalada Power point -ka ugu fiican si aad uga baxdo sida caadiga ah
Marka xigta waxaan ku siin doonnaa tusaalooyin tusaalooyin soo -jeedinta Powerpoint si aadan had iyo jeer ula joogin wax isku mid ah.
Template -ka lagu soo bandhigayo goobo badan oo midab leh
Iyada, waxaad awoodi doontaa inaad siiso muuqaal firfircoon oo farxad leh mashaariicdaada. Waxay xusuusineysaa Google badan, gaar ahaan kuwa goobo iyo midabyo, sidaa darteed mashaariicda la xidhiidha farsamada, internetka, bogagga shabakadda, iwm. aad bay u guulaysan kartaa.
Waxaad ka soo dejisan kartaa halkan.
Si buuxda ayaa loo tafatiri karaa oo waad beddeli kartaa sawirrada iyo qoraalka labadaba. Intaa waxaa dheer, waxaad leedahay 25 bog oo kala duwan, si aad u habayn karto sidaad jeceshahay. Waxay kaloo leedahay 80 astaamood iyo khariidad adduunka oo aad ku beddeli karto midabada iyo cabbirka si aad ula qabsato.
Waxaad ka soo dejisan kartaa halkan:
Qaabka soo -jeedinta qaanso -roobaadka
Foomamka Awoodda Vintage Power point
Markan waxaan ka fikirnay mid leh taabasho duug ah oo xarrago leh, oo leh soo jiidasho gaar ah iyo nostalgia waqti isku mid ah. Ku habboon bandhigyada aan xoogga la saarin mustaqbalka iyo kan casriga ah, laakiin in la ilaaliyo hawada dareenka iyo diirran ee adeegga ama badeecada.
Qaab -dhismeedka bandhigga guridda oo leh moodboard
Hababka dhibcaha awoodda ee Canva
Xaaladdan kama hadlayno qaab -dhismeed gaar ah, laakiin waxay ku saabsan tahay meel aad ka heli karto qaabab kala duwan oo Powerpoint ah oo aad ka dooran karto. Waxaad leedahay moodooyin kala duwan iyadoo ku xiran ujeeddada mashruucaaga, ha ahaato mid dib loogu bilaabayo, shabakadaha bulshada, xayeysiisyada, bandhigyada. iwm. Waxa fiicani waa taas Waa lacag la'aan, qaarkooda uun baa la bixin doonaa.
Bandhig faneed qosol leh
Ku habboon soo bandhigidda mashruuc socdaal, tusaale ahaan meheradaha safarka, hoteelada, maqaayadaha, iwm.
Bogagga waxaad ka heli doontaa loo diyaariyey oo loo diyaariyey si ay tahay inaad kaliya ku darto sawirrada iyo qoraalka aad u baahan tahay inaad dhigto. Waxay u egtahay mid aad u wanaagsan oo sawirka ayaa mudnaanta la siinayaa qoraalka sababta oo ah waxa ay raadineyso ayaa ah inay soo jiidato dareenka iyaga.
Waad soo dejisan kartaa aquí.
Haddii waxa aad raadinaysaa ay yihiin kuwo aad u culus oo ah PowerPoint Powerpoint oo u muuqda qaab aad u xirfad badan, adigoon caajis lahayn oo aan fiicnayn, waxaad leedahay tan. Midabka ugu weyn waa buluug, sidaa darteed haddii uu yahay midka aad jeceshahay mar hore ayaad heshay wax la kasbaday, inkasta oo runtu tahay in lagu beddeli karo afar midab. Sidoo kale waxay leedahay 45 shey oo kala duwan si aad shaqadaada ula qabsato si kaamil ah.
Habyaalada barta korontada ee alaabta
Haddii aad u baahan tahay inaad dhisato a bandhig ku salaysan sawir, maadaama ay noqon karto badeecad (guri, qol, qurxinta, iwm) halkan waxaad ku haysataa mid ka mid ah. Waa qaab -dhismeed halkaas oo qoraalku ka taagan yahay, laakiin, ka sarreeya, sawirrada.
Soo bandhigida summada
Kahor intaanan kuu sheegin tusaalooyinkaas xarrago leh maahan inay caajisaan ama caajisaan, tanina waa tusaale kale oo aad haysato. Dhexdeeda waxaad ku isticmaali doontaa midabyo aad u yaab badan, iyo sidoo kale caddaan. Waxay ku siin doontaa taabasho firfircoon oo badan mana aha inay xumaato, laakiin waxay u eegi doontaa xirfadle laakiin taabashada "dhimbiil".
Qaababka Soo Bandhigista Xarrago leh ee Awoodda Awoodda
Tallaabada dhexe waa tan. Waxay u egtahay xirfad iyo asaas ahaan, laakiin waqti isku mid ah wuxuu iftiimiyaa walxaha qaarkood ee bogagga kala duwan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad soo bandhigto mashruuc culus laakiin leh buraashyo gaar ah.
Soo bandhigid alaab
Mid kale oo ka mid ah qaab -dhismeedka Powerpoint ee aad u isticmaali karto inaad ku muujiso badeecadaha waa kan. Waa a bandhig bilaash ah oo diiradda lagu saaray naqshadda gudaha, inkasta oo runtu tahay in aad u adeegsan karto waxyaabo kale oo badan.
Haddii aad raadinayso inaad soo bandhigto meherad iyo in aysan sidaas rasmi ahayn, laakiin taa lidkeeda, waxaad ka fikiri kartaa soo bandhigiddan. Waxaa lagu gartaa sawirrada iyo naqshadaha asalka ah, hooska guduudan oo leh muuqaal siinaya “wax” qalaad oo bariga ah.
Habyaalada PowerPoint ee makhaayadaha
Haddii mashruuca macmiilkaagu la leeyahay makhaayad, tani waa mid ka mid ah bandhigyada ugu wanaagsan ee aad isticmaali karto. Waa qaab -dhismeed casri ah oo leh ikhtiyaarro kala duwan oo lagu muujiyo dhaqaalaha, kooxda shaqada, badeecadda, iwm. Intaa waxaa dheer waad awoodaa habee adiga oo beddelaya nooca font, midabada iyo inbadan.
Sidaad arki karto, waxaa jira qaabab badan oo Powerpoint ah, kaliya waa inaad heshaa midka ku habboon waxa aad raadineyso. Miyaadan midna ku talinayn?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Templates PowerPoint BILAASH ah
Sida loo sameeyo miirayaasha Instagram